Ra’iisul wasaare Kheyre oo si murugo leh uga hadlay geerida wasiir Cabaas Siraaji (DAAWO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ra’iisul wasaare Kheyre oo si murugo leh uga hadlay geerida wasiir Cabaas Siraaji (DAAWO)
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa habeenkii xalay ahaa shir jaraa’id ku qabtay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, kadib markii la dilay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska Allaha u naxariistee Cabaas C/laahi Sheekh Siraaji.
Ra’iisul wasaare Kheyre oo wejigiisa laga dheehan karay murugo ayaa marka hore ka tacsiyeeyay geeridda naxdinta laheyd ee ku timid wasiir Cabaas Siraaji, isagoona ku tilmaamay inuu ahaa shaqsi aad u ixtiraam badan, firfircoon, islamarkaana caqli badan, waxaana uu alle uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo.
“Waxaan halkaan uga tacsiyeynaa eheladii, asxaabtii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday wasiir Cabaas oo caawa ku geeriyooday magaalada Muqdisho, Allaha u naxariistee wasiir Cabaas wuxuu ahaa iftiin usoo baxay umadda Soomaaliyeed, islamarkaana tusaale u ahaa dhalinyarada soo baxaysa, wuxuu ahaa shaqsi taariikh wanaagsan leh, ahna nin wadani oo dalkiisa rabay inuu wax u qabto, balse nasiib darro caawa ayay noloshiisa soo dhamaatay” Sidaas waxaa yiri ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa sheegay in geerida wasiirka uu ogeeysiiyay madaxweynaha Soomaaliya, islamarkaana uu si deg deg ah dalka ugu soo laaban doonno maanta oo Khamiis ah, si uu uga qeyb galo aaska wasiirka loo sameynayo.
Allaha u naxariistee wasiir Cabaas oo ahaa wasiirkii ugu da’da yaraa ee ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaana uu xilka la wareegay 3-dii bisha April ee sanadkaan, isagoona xalay lagu dilay afaafka hore ee xarunta madaxtooyadda Soomaaliya.
Dilka wasiir Cabaas ayaa waxaa ka dambeeyay ilaalada hanti dhowraha guud ee Qaranka Nuur Faarax Jimcaale, oo toogtay wasiirka, kadib markii ay ka shakiyeen gaarigiisa oo si aad ah ugu soo dhawaaday gaarigii ay saarnaayeen.